Kismaayo News » Wasiiro xukuumadda Kheyre oon waagu ka baryin
Wasiiro xukuumadda Kheyre oon waagu ka baryin
Kn: Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa saaka kala diray qaar kamid ah xubnaha xukuumaddiisa isla markiibana ku badalay xubno u sii diyaarsanaa.
Wasiirka arimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arimaha gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Cabdi Faarax Siciid (Juxaa), iyo wasiiradda ganacsiga iyo warshadaha, Khadro Axmed Ducaale ayaa saaka baalasha laga rifay oo ku waabariistay ayagoo shacab ah.
Wararku waxay sheegayaan in Yusuf Garaad uu eersaday beesha uu ka dhashay oo dalbatay in laga badalo maadaama ay tiirsanayeen inuusan meel adag ka istaagin dhacdooyin dhawr ah oo dhex maray xukuumadda uu ka tirsanyahay iyo beesha uu ka dhashay, halka Khadro iyo Juxaa ay marar badan ka dhago-adeygeen awaamiirta Kheyre. Warar kale ayaa tibaaxaya in sadexda wasiir ay siyaasad ahaan aaminsanaayeen ku dhaqanka nidaamka federaalka ee dawladdu ku dhisantahay taasi oo inbadan ay madaxda qaranku isku dayeen inay ka talaabsadaan balse wasiiradan saaka la buriyay ay ka horyimaadeen ku shaqaynta rabitaanka madaxda. Siday dooniba ha ahaatee sadexda wasiir ayaa shaqada laga cayriyay ayagoo gacanta ku haya kiisas muhiim u ah dalka.
Sadexda wasaaradood oo muhiim ah ayuu Kheyre u magacaabay sadex kale oo loo badinaayo inay Kheyre uga dhago nuglaan doonaan xubnihii hore ee shaqada laga fiijiyay.
Khadro waxaa lagu badalay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Juxaa waxaa lagu badalay Cabdi Maxamed Sabriye halka Yuusuf Garaad lagu badalay Axmed Ciise Cawad.
Horay waxaa shaqada iskood uga tagay wasiirkii Gaashaandhigga iyo wasiiraddii ka hortagga masiibooyinka kuwaasi oo sheegay inay shaqada uga fariisteen wadoshaqayn la’aan hogaanka dawladda. Lixdii bilood ee ugu danbaysay waxaa la hadal hayay isku shaandhayn lagu sameeyo xukuumadda Kheyre laakiinse waxay hadda u muuqataa in badalkeedii ay tahay hebel buri oo hebel keen. Dadka qaar ayaa qaba in dhardhaarada oo la kala badalaa uusan dhadhan u yeelayn dhariga sidaasi darteed ay xukuumadda Kheyre u baahantahay istaraatiijayad cusub oo dalka lagu samato bixinaayo taasi oo ka saraysa eex, nin jeclaysi iyo dhaqaale abuur.